Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra - China Products Factory
Ny famokarana vahaolana PP tavoahangy automatique IV dia misy fitaovana 3 napetraka, milina Preform / Hanger Injection, masinina mitsoka tavoahangy, masinina manasa-mameno-famehezana. Ny tsipika famokarana dia manana ny mampiavaka ny mandeha ho azy, mahaolona sy manan-tsaina manana fampisehoana marin-toerana ary fikojakojana haingana sy tsotra. Fahombiazana avo lenta sy vidin'ny famokarana ambany, miaraka amin'ny vokatra avo lenta izay safidy tsara indrindra ho an'ny tavoahangy plastika vahaolana IV.
Ny tsipika famokarana kitapo malefaka tsy PVC no tsipika famokarana farany misy haitao mandroso indrindra. Izy io dia afaka mamita avy hatrany ny famahanana sarimihetsika, fanontana, fanaovana kitapo, famenoana sy famehezana ao anaty masinina iray. Izy io dia afaka manome anao famolavolana kitapo samihafa amin'ny seranan-tsambo tokana, seranan-tsambo tokana / avo roa heny, seranan-tsolika malefaka malefaka sns.
Ny tsipika famokarana Ampoule dia misy ny milina fanasan-damba ultrasonika, ny milina fanamainana sterilizing RSM ary ny milina famenoana AGF sy ny famehezana. Mizara ho faritra fanasan-damba, faritra fanamafisam-peo, faritra famenoana ary famehezana. Ity tsipika kely ity dia afaka miara-miasa ary tsy miankina. Raha ampitahaina amin'ny mpanamboatra hafa, ny fitaovantsika dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa, ao anatin'izany ny habeny ankapobeny, ny automatique ambony & ny fitoniana, ny tahan'ny lesoka ambany sy ny vidin'ny fikolokoloana, sns.
Ny tsipika famokarana ambaratonga faharoa ho an'ny pharmaceutika sy ny fitsaboana dia mazàna amin'ny milina fanaovana carton, cartoning tranga lehibe, mari-pamantarana, tobim-pandrefesana ary koa ny palletizing unit ary ny Regulate Code Code System
Raha vantany vao nahavita ny fizotry ny famokarana ao amin'ny fonosana Secondary Packing fanafody sy fanafody isika, dia hafindra ao amin'ny trano fitehirizam-bokatra ireo vokatra.
Ny milina fanasana syrup manadio syrup dia misy ny fanasana rivotra tavoahangy / ultrasonika, famenoana syrup feno na famenoana syrup misy ranony ary milina fanidiana. Izy io dia mampifangaro endrika, milina iray afaka manasa, mameno ary mamoaka tavoahangy ao anaty masinina iray, mampihena ny vidin'ny fampiasam-bola sy famokarana. Ny masinina iray manontolo dia miaraka amina rafitra matevina, faritra kely ipetrahana, ary kely ny mpandraharaha. Azontsika atao ny mampita amin'ny tavoahangy tavoahangy sy ny milina fanoratana ho an'ny tsipika feno.
Ny milina fivondronanay syringe dia ampiasaina amin'ny fanangonana syringe ho azy. Izy io dia afaka mamokatra karazan-tsindrona isan-karazany, ao anatin'izany ny karazana slip, karazana hidin-trano, sns.
Ny masininay Syringe Assembling dia mandray LCD aseho mba hampisehoana ny hafainganana fihinanana, ary afaka manitsy ny hafainganam-pandehan'ny fivoriambe, miaraka amin'ny fanisana elektronika. Fahombiazana avo lenta, fanjifana herinaratra ambany, fikojakojana mora, fampandehanana maharitra, tabataba ambany, mety amin'ny atrikasa GMP.
Ny tsipika famokarana fantsom-dra dia misy ny fantson'ny fantsom-batana, ny doka simika, ny fanamainana, ny fijanonana ary ny fantsom-batana, ny fantsom-bokatra, ny fantsom-bokatra, sns.